This isacrime committed by prison authorities, police, Home Minister and Min Aung Hlaing. If no independent Postmortem done by UN authorities, UN should summon them at ICC to investigate | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeThis isacrime committed by prison authorities, police, Home Minister and Min Aung Hlaing. If no independent Postmortem done by UN authorities, UN should summon them at ICC to investigate
This isacrime committed by prison authorities, police, Home Minister and Min Aung Hlaing. If no independent Postmortem done by UN authorities, UN should summon them at ICC to investigate
February 19, 2017 February 19, 2017 drkokogyi
This isacrime committed by prison authorities, police, Home Minister and Min Aung Hlaing.
If no independent Postmortem done by UN authorities, UN should summon them at ICC to investigate.
မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်သမား ၈ ဦး ရောဂါနဲ့ သေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်းတောဒေသ အကြမ်းဖက်မှုတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်သမား (၈) ဦး ရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ အစိုးရအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီက သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ အကြမ်းသမား ၅၈၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ အဲ့ဒီထဲက ၅၁ ကို ပြန်လွှတ်ပေးထားကာ ၈ ဦး ကတော့ ရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပြီး ၅၂၆ ဦးကိုတော့ စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူး၊ စာကြည့်တိုက်မှူးနဲ့ ရုံးစာရေးတွေအပါအ၀င် အပြစ်မဲ့အရပ်သား ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သလို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
← Muslim population
Useless, valueless Idiot Sit Khwe Phongyi Thidagu, go to hell. Should feed him U Ko Ni’s chee. →